Al-Shabaab oo tababaranaysa dhalinta Soomaliyeed ee dhigata jaamacadaha dalka Pakistan – Radio Daljir
Agoosto 24, 2012 3:55 b 0
Dubai, Aug 24 – Kooxda Al-Shabaab ee ku xiran ururka Al-Qaacidda ayaa bilaabay inay qortaan ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Pakistan inay tababaro u siiyaan ka mid noqoshada kooxdooda, si’ay ugu adeegsadaan weeraro ay ka fuliyaan dalalka Yurub, sida uu sheegay khabiir dhinaca amaanka ah.
“Al-Qaacidda waxaa ay qorshaynaysaa sidii ay saldhigayadeeda qarsoodiga ah ee ku yaalla Pakistan iyo Afgaanistan ay ugu heli lahayd dad kasoo jeedda qaaradda Afrika” ayuu yiri Carl Adams oo ah khabiir la dagaalanka argagaxisada qaabilsan oo saldhigiisu yahay magaalada Dubai ee dalka Isutagga Imaaraatka Carabta.
“Waxaa ay qorshaynayaan in saldhigayadooda qarsoodiga ah ee Afgaanistan iyo Pakistan sidii ay ugu rari lahaayeen wadamo Afrika ku yaalla” ayuu intaasi sii raaciyay.
Khuburada ayaa muujisay ardayda Soomaliyeed ee dalka Pakistan inay yihiin kuwa u nugul ka mid noqoshada argagaxisada, iyagoona intaasi raaciyay laba ka mid ahaa ardayda Soomaliyeed ee dalka Pakistan inay horay ugu? biireen tababarada Al-Qaacidda ay ka waddo wadanka Pakistan.
Warkan kasoo baxay khuburada ayaa saamayn ku keeni karta waxbarshada dalka Pakistan ay ku haystaan arday Soomaaliyeed oo tiradoodu u dhaxayso 5,000-8,000,kuwaasi oo intooda badan dhigta kuliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha Pakistan.
Guddiga xulida baarlamaanka oo iska fogeeyay eedayntii Shariif Sh. Axmed.